maalgelinta | Cosmos koobi karayn
Posted in xoog . dembi . lacag . wax aan waxba tarayn . xaqiiqooyinka . dhaqaalaha
- Mr., idinku innaba ma aydaan arkin in ay field of my dibi, oo ka soo cararey?
- ma, Anigu ma ihi digsi degaanka.
- Mr., oo i siiya dibi ama digsi degaanka?
- Marka digsiga ka Eebayaal ah – sidaas darteed la siiyo, iyo haddii muzhikou ka – waa.
(Qaybaha taariikhda Belarus)
The siiyaa waa ansax ah mid ka mid ah dadka.
Waxaad doonaysaa in aad dadka baabbi'in? – nastrugai “Panov” ka “ragga”.
Sidee in ay lacag sameeyaan in aduunka, halkaas oo aan ka samaysan for ilaha dakhliga ku salaysan is-dhaafsiga badeecadaha ah? Sida loo qarin, wax dakhli ah oo keena in burburinta qayb ka mid ah aduunka, sababta oo ah waxay ku salaysan tahay qaybo waaweyn ama yar otgryzanii ah “pie ah”? pie, taas oo hubi in ay soo afjarto. Существует множество способов реализовать такие подлые замыслы.
Haddii taariikh ahaan meelaha qaarkoodna ay maamulaan si ay u sameeyaan a Rayaale hufan, kuwaas oo awoodi karin xitaa qolka dheemman – Dabcan waxaa jira rabitaan ah ka dambiilayaasha kala duwan si ay u dhan naftaada qabsaday. si fiican u, ama, in kastoo, ah, in ka doonista this, haddii aad ka dhigi naxdin weyn iyo fowdo in uu abaabulo.
masaal Indian ah oo ku saabsan labadii yeey.
Beri baa ah Indian duug ah uu awow run mid nolosha furay.
- In nin kasta oo uu jiro halgan, aad uula mid tahay halgan u dhexeeya labada yeey.
Mid ka mid ah in Yeeyi Cunto ka dhigan tahay wax shar ah - hinaaso, masayrka, qoomameeyo, anaanimada, hamiga, been…
Oo yeydu waxay kale waa wanaagsan yahay - nabad, jeclahay, rajaynayaa, runta, naxariis, daacad…
Indian yar, taabtay u awoowe erayada muhiimka ah,
muddo yar ka fekerayo, ka dibna wuxuu ka codsaday:
- waa maxay in Yeeyi Cunto at guul dhamaadka?
Old Indian yar dhoola caddeeyey, oo ku yidhi,:
- Had iyo jeer ku guuleystay in Yeeyi, oo waxay idinku daajin.
Haddii aad raacdo hadalkii “Nin waa yeey” – daaha ka badan.
From Laatiin: Man waa yeey [homo cell lyupus khomini).
Of «Asinaria» play ("Dameer Comedy") qoraa iyo Abwaan Roman Plautus (Titus Plautus Maktsiy, ca.. 250 - 184 BC. e.).
qowlka ayaa helay nolol labaad oo ay noqoto mahad caan ah si ay Faylasuuf siyaasadeed Ingiriisi Thomas Hobbes (1-588-1679), kuwaas oo uu shaqo u adeegsaday "Lewiiyaataan" (no. 1, arki. 14). Waxa uu faallo uu sha ku saabsan "dagaalka oo dhan oo dhan", in uu yahay, gobolka, taas oo ahayd sifo ee bulshada aadanaha ilaa gobolka Institute…
Sidaa awgeed waa ay fududahay in la soo gabagabeyn, in qof kasta – waxaa xoogaa Wolf. Iyo si ay u noolaadaan oo yeey kuwa, si aad u hesho cunto. Habka ugu fudud ee – dilo iyo mid daciif ah oo aan hubaysnayn cuni. Ama u dhaqmaan hab noocan oo kale ah, badan oo doonayay in ay ku quudiyaan in Yeeyi Cunto waa sida u fiican ah. Si arrintan loo sameeyo, si aad u qaadan kartaa qaar ka mid ah meel la sarraysiiyaa – markaas dhan dulleeyay furan doonaa heer sare, на котором уже поджидает всех хитрый волк.
Marka la eego xaqiiqada, in ay jiraan kala duwan Foomamka gaajo, in Yeeyi Cunto lagu daabacay had iyo jeer ka dhergi. Oo iyaga ku quudin la dhalanteed ah oo leh farxad, sida caadiga ah, waxay, oo markii danbe ka qoomameeyay.
Sida laga soo xigtay mid ka mid ah sababaha keena dhimashada caalamka, dad badan oo degaanka ku hawlan dhillaysi qoyska. Sababo la fowdo this waxaa si toos ah ama si dadban ahbaa, qoysaska iyo xiriirka qoyska, taas oo kor u furmay suurtagalnimada lacag ka qoyska iyo dhalashada carruurta random ku listo cadda kan. Haddii xaaladda tani sii socoto muddo dheer – Nolosha Adduunyo waa beddelaa mid shil weyn.
Haddii cunto noolaha sinaba u awoodeen inaan si madaxbanaan u heli muwaadin kasta – qanacsanaanta baahida qaar ka mid ah meydadka khiyaano ee jirka laga yaabaa inay noqdaan soo horjeeda adag tahay u baahan tahay in ay ka qayb, wehelkaaga ama bar kaabaha.
Qaybiyaa yeey ee labka iyo dheddigga, fududahay in la rakibo, kulma gaajada dareen in ay tahay in Yeeyi, oo dhadig uma ay xiriir tagaan (munaasabadda macno ah ma). Halkee dunida oo dhan si ay u abuuraan shuruudaha hoos kaas oo ku qancay baahida yeey oo dhan, nololeedka hoggaamineed, taas oo ku waani inay habdhaqanka arxan xagga dabeecadda iyo deegaanka – horumarinta guul yeey sida waxay keeni doontaa in ka lumay dhamaystiran oo dunida iyo dadkeeda. In this, quudinta yeey, dheddigga samayn dambiyada ka dhanka ah nabad badan, labada lab iyo baabbi'iyeen World tixgeliyaa. Oo dunida oo dhan waa si adag u dhaqaaqo uu Future halis ah u gaar ah. Isla mar ahaantaana ay u dhibin, waxa ku saabsan this qabaa ah yeey gaajoonaya.
Ma aha adag tahay in la arko, in xumaanshaha joogtada ah ee sirdoonka waxay noqon doontaa in Caalamka la mid ah. Iyo faa'iido waa in cududdii qashinka iyo qashinka yeey, kuwaas oo ay faa'iido u gaar ah iyo in ay la kulmaan hawada muddo gaaban ha ka cabsan in shire meesha podvernotsya, sii in qashinka hab nololeed, jeestay dunida ku xeeran ee ah qashinka u bi'isaa weyn. Ka dib oo dhan,, haddii li'I kasta “hadda” – “ka dibna” horeba kaliya ma shaqeyn doono (waayo, ninna doono). Sayidka, a wareegyada yar smerdy boqorrada noqon gudahood, maxaa yeelay on yeey trashcan la rijeynaya in ay ku noolayn.
isku day Smerdy u maydho inta badan ee suurtogalka. Tan waxa u sabab ah dhegyadii ay DNA, ay sabab u tahay taas oo jidhkooda waa joogto stinks. Taas darteed isticmaalka aan waxtar lahayn oo biyo ah ee dunida jeestay qashinka dhowr jeer ka dhakhsi.
Sidaas darteed,, moodaa rogeen siyaasadda bi'isaa qasba dhadig purebred ka dhigi qalad ah oo ku siin farcankii yeey qashinka. Sababo la joogo ma jiro nabaad-degdeg ah idaad (ay sabab u tahay cyclicality oo ka mid ah qalad la mid ah), oo dhaxla qaadan foomka ka kaamilsan ee wareegga ugu dambeeya ee horumar generic, cawisa heerka goglay dixiri idhaha. Tani waa March Liibaanay yeey qashinka gubanaya, doonaya in ay final “dhalaalaya” mustaqbalka. Ha nuugo rajo ee Hijrooday ee Rabbiga, Пространства Жизни и Пространства Планеты.
Si loo xoojiyo booskiisa u gaar ah ammaan Random Kings faafi karaa khayaal ah ee sinnaanta, inay qariyaan ay failure u gaar ah iyo gudeed booska rasmiga ah, продолжая одурачивать Мир, u dhaqaaqo meel.
sinnaanta – Ra'yiga halkii milaratigooda, taas oo ku hoos noolaayeen xukunka cadaalad darro tahay oo kaliya lagama maarmaanka u ah, in loo fishay ka bydlota jirta qaaday go'aamada, durachilam lacagta in. tupizna mass – fure u ah yeey qashinka saldanad guul iyo muddo-dheer.
qaybaha kharribmayo Maalgelinta ee bulshada keenaysaa in ay baahsan. Cabudhinayo kartaa formation iyo horumarinta wax jihada nolol-adkaynaya. Sidaasaa baaba'aan wax tartan oo khatar ku ah ee hadda jira madaxda.
aqlabiyad sharci ah (tani waa waxa loola jeedo sida ay sinnaantu) si guul ah lagu cabudhibayo xarumaha horumarinta tayada, raja carar ah dunida, in halkaas oo ay tahay “ugu”. deegaanka dabiiciga ah waa model analoogga xoogga microbes badan Nature ah: jeermiska kaliya aqlabiyad, oo kaliya ay qaadi karaan “sax” go'aanka, sababtoo ah jeermiska – Xayawaanka ugu caqliga ee dabiiciga ah, mid kasta oo iyaga ka mid ah xariifnimo, xataa, badan Nature nafteeda.
Waxaad ku siin karaan jeermiska hub ah, si ay u saaray maskaxdooda in ay. Ka dibna qof walba arki karin wax soo saarka shaqada hanad waxay iyaga u noqon doonaa, taas oo, si kastaba ha ahaatee, aan aad u noqon doonaa ciidda ka duwan. Ka dib oo dhan,, microbes hubeysan ay qabanayaan “gaar ah oo wanaagsan iyo iftiin dhamaystiran”.
Si ka duwan ee hadda jira, kaas oo ku nool shaqadooda u gaar ah iyo guulaha shaqada, dulin ku nool kharash ku, in u suurtagashay in ay ku jeexjeexi, qanjaruufan, nuugi on shayga badan oo parasitize. In si kale loo dhigo, haddii wax this – quruunta oo dhammu – cayayaanka, jinigii iyo caanonuug ah ciidamada uu, lacag, hantida, ka iman kara, sameysid wax alla wixii la helay on abuurka ah farsamooyin dheeraad ah uga hornimaadno of parasitism iyo ururka waxaa waajib ah in a nidaamyada dadka gacanta rabshado. Sayidka naftooda dadka dhaqaalaha dulin si, in iyagu way baabbi'iyeen, oo wuxuu ka dhigay kan ugu daran.
“Sweden”, rogaya sharciyada dabiiciga ah lagu qoro rugta daaweynta buuxa ee Space.
shaqada ee nidaamka wax ma aha wax badan ka duwan nidaamka kulaylku. taas oo, Dabcan, Waxaan u baahanahay shidaalka, si loo soo saaro tamarta kulka. Si aad u kululeeyo dareeraha, sida caadiga ah, isticmaalka dabka, oo dabka laga helay iyadoo ay sabab u sari shidaalka, oo waxaa laga yaabaa in xoogaa yar oo qoryo iyo qori.
Sidoo kale, nidaamka dhaqaale ee jiritaankeeda u baahan tahay saad joogto ah tamarta. Laakiin waa halka walaalkeed?
tamarta intiisa kale – waa tamarta in ku jira gudahood shayga, waxaa suurtagal ah in soo saaro oo kaliya in ay dhacdo, haddii aad wax baabbi'iyaan, ama carqaladeeyo xasiloonida ee ay qaab. Maxaa lagu gaari karaa iyada oo loo marayo sari shayga dabka. Xaaladdan oo kale, ayuu lagu qasbi doonaa inuu si buuxda oo aan reserve gubi.
miyir kasta wuxuu leeyahay daacadnimada u gaar ah, Nabaad guurka taas oo horseedaysa in la sii daayo tamarta, taas oo lagama maarmaan u ah jiritaanka nidaamka maaliyadeed. In this, bani-aadamku waa abuse dab nidaamka dhaqaale ama shidaalka dhaqaale. Oo haddii uu jiro miyir a ku xad daacadnimada oo ka mid ah – waa u qaxmayaa nidaamka olol, qof kasta oo aan u tudhin.
On meeraha dhimashada jira kiisas badan ee tuugada ah ee hantida gaarka loo leeyahay, marka “wasakh dhacsan”, ka faa'iidaysanaya booska rasmiga ah, Doqon dhalinyarada tayo leh, Ooga caqabad ku yahay horumarka iyo fahamkooda adduunka. iyaga ku hay muddo dheer ee mugdiga ah iyo hubaal la'aan, diri sano ee ugu fiican noloshooda qashinka.
Maskax ahaan nidaamka baabi'inta qabanqaabiyayaasha xanuunsan loo xilsaaray soo jiidasho leh, safarka ifka iftiinka dabka loo mastaafuriyo Light.
Haddii aan ka hadlo dhaqanka, meerayaasha dhimasho jira – aysan suurto gal ahayn in ay iska indha Kacaanka, oo waxaa loo arkaa satalayt isbeddellada ku yimaada sharciga.
Ha leedahay waqti si uu u noqdo mid ka mid ah gobolka cagihiisa sida uu badalay kale, dheeraad ah “kaamil ah”. Laakiin halkaas oo lugaha u koraan at sida “kaamil ah”?
Sida caadiga ah kacaankii ka dibna dhici, marka halis ah (laakiin aan ugu weyn) “ciyaaryahanka caalamiga ah”, Waxaa la socday in la sameeyo “boosaskooda”.
Si loo badbaadiyo xooggiisa unshakable u gaar ah oo ammaan ah oo raaxo leh kooxaha chernosuschnostnye mustaqbalka diyaarin wareer in lagu soo qabto iman kara ee hubka furay “ciyaaryahan caan ah”. Oo ka dib markii nolosha kacaanka, sida, fiicnaan, laakiin oo kaliya sababtoo ah, awoodda cusub ku lug, inkastoo aysan socday dheer.
More Revolution waa, marka this “Oparin”, ogaaday rajo ay jiritaanka gaar ah, oo doonaya inay soo booqdaan (ugu yaraan ma aha waqti dheer) carshiga Imperial, xataa at qiimaha noloshooda iyo hantida dalka oo dhan. Waa si fiican u ogyahay dabeecada runta ah, halkaas oo ay jiraan meel kaliya ee ku tuurno musqul. In this, haddii ay suuragal tahay “goglay dixiri” diyaar u ah inay wax walba incinerate, waayo rajada wanaagsan ee naftooda iyo ma noqon doono.
Maaddaama ay wax soo saarka shaqada caqliga “goglay dixiri” iyo “finan ciribta” Light waxaa ku dhashay sida nolosha qalab nidaam, in hoos yimaada oo dhan ugu muqadas, dhigyo halis ah oo cod weyn si fudud ammaantiisii ​​hore iyo xoog baabbi'in, waayo, qaar ka mid ah 100 sano. “Oparışam” ku filan a boqol oo sannadood, si ay u soo noqdaan dalka halyeeyga xarunta diamond ah ee musqusha god.
Haddii tirada shaqaalaha rayidka muuqataa reformer cajiib ah, inay awoodaan inay la baabi'iyo baahida loo qabo in kacaanka – dilkii ugu horeeyay ee sida. tusaale ahaan, mar on mid ka mid ah meerayaasha ee burcad Death of dambiilayaasha ayaa toogasho lagu dilay by magaca nin Stolypin, iyo dib u habaynta uu codsatay in Shiinaha. Sidee dadka ee Shiinaha ayaa uducaynaya koray (qeybtii waxaa sharci-darro ah) , iyo dadka Russia ayaa dhowr qeybood by badh iyo hoos u sii dhacaysa.
No eed, miyir in saafi ah ma doonayaan in ay ku nool yihiin musqusha god, laakiin dambi ah ah, kuwaas oo god this abaabulay: waxaa laga yaabaa in ay tahay nooc ka mid ah Burcad ah bidaarta leh wadada weyn iyo dembiyada ee caalamiga ah la magac, naaneesta. Waa kuwee waa in ay abaal marin shaqo tayo sameeyey by dhibicda 13-laab tirada la frontloading iyo sarakicidda-hoosaadka. All-taliyeyaal la mid ah waa in la sidoo kale abaal marin. Laakiin cadayn u soo jeedisay, sidaas eed ku lahaato wax walba Lena, halkaas oo uu ka noqday taageere. Sida in, iyo inaanay naagtu jilicsan dareemi daciif u burburiyey Empire oo dhan iyo muquurtay fowdo ah dadka dunida oo dhan sannado badan. Tolley ka awood la'aanta in la xakameeyo caadifadaha ama fikrado gaar ah ay, felts ah in la sameeyaa shaqada ee bulshada qarsoodi ah, ama laga saaray wixii ka shisheeye. Sidaa darteed, “Lena” Leno-sida iyo xukumay in laga dhigo gacanta ugu fulinta ah laga leeyahay iyo waajibaadka noolaha, ama in ka saarida caadiga ah ay dhacdo caasinimada.
Features Kacdoonkii waa in, in ka hor ay gabagabo guul daruuri dhici dhexda “duugga ah dawladda” gacmo aan istaahilin. Oo sudbolovy xirfadle sidaas beddelay cusub ka dhigay lomoverzhtsev. Revolution ma aha cadaalad ah.
TK. “goglay dixiri” yaamayska uga musqulaha waa ogyahay ay la'aanta gaar ah oo tartan – waxay baabbi'in tartamayaasha iyadoo la kaashanayo rasaas iyo baastoolad, iyo duping dadka bogasho dheer: “waxa, ka dib oo dhan, waa?” A boqol oo sano ka hadda (marka ay gasho) way ka gabyi doonaa jajabkiisa, waayo, iyagu way arinku.
Ka dib markii la wareegin guul dadka duping “lagu eedeeyay” shaqada, iyo burcadda lagu daabacay bilaabaan inay ka Qoranaysaan dhaxlay “pie”. iyo sida!? wadamada noocan oo kale ah aan u socday si ay u horumariyaan, maxaa yeelay, waxaa kala qaybiyay ugu yaraan qaar ka mid ah, in uu helay.
Oo degdegin onsam Valparaiso,
By Onduri loola cararay rubles.
Oo waa inaad, waalanyahay, isku day,
mindi af badan in ku jiifa dhiigga.
Guuritaanka by maalgelinta habka kor ku qabsaday, tuugag hore iyo dambiilayaasha loo beddelaa maal casri ah. Iyo bilaabaan in ay sameeyaan “wanaagsan”. Tani waxay noqon kartaa dhismaha xarumo cusub oo casri ah oo ku saabsan burburka ka mid ah dalalka baabbi'iyey. Waayo, dadka deegaanka bilaabo si ay sharaf iyo ixtiraam sida maal-sharaf leh iyo samafalka, reyreeyaa, haddii ay soo saaraan dejinta a filiqsanaa ee aagga la heli karo. Dabcan, markii ay loo yaqaan ajaanibta ah, maxaa yeelay, waxaa ku qasbay in ay ka baxaan dalka, in si degan oo si ula kac ah in ay iyada dhacaan. in, on dhimashada meerayaasha qasan waalan socday.
Waxaa inta badan u dhacdaa lacagaha qalaad baryzhnichestva meelaha sida. Iyada oo raasamaal ah oo ku filan huckster awoodda dhaqaale weyn oo u furmay ay bangiga u gaar ah oo ku sii socda si ay u leedahay hawlaha sharci darada ah mar hore ka yar calaamada “sharciga”. awooddo “sharciga” Waxaa ku qoran by huckster isla?
Doryvayas si xoog, gabbado ee uu tuugu uu bilaabo inuu si tartiib ah oo si qarsoon si ay u hirgeliyaan kacaan “sharciyada”. xataa, haddii xoogga la helay by rasmi ah – iyadoo ay sabab u shuqulkiisa shaki kuma jiro, in “sharciyada” waxaa jiray kacaan. Waa kuwee darafyadiisa, dadka ama mustaqbalka ayaa weli ku jira taliyaha cusub “waxba”: Waxay u xanuunsadaa iyo waxbay ushafeeci idanka eedda dambiyada, in uusan samayn, iyo, xataa, haddii ay ahayd ka dhanka ah – Waxaan ma u awoodin inuu hortago oo dhan of this.
Waayo, dambiilayaasha micne lahayn oo dhan waxaa loo baahan yahay in si, xaaladda kasta oo gaar ah si loo xakameeyo hal badhan. abuurka ah ee sida “xal riix-button” – Fikradda ma aha mid fudud ilaa xad. In fulinta waxaa looga faa'iideysan waayo maskaxda ay ugu fiican, Oo weliba, hoos ku dhisaalan sheegashooyin kala duwan,: yabooha Qaar ka mid ah ma in la dilo, kale yabooho si loo kobciyo, qof siinaya kaliya ku hawlan shaqada jecel yahay halkii uu nebcaa wiilkeedu. Laakiinse aakhirkeedu wuxuu u abuuray xal badhan, mid kasta oo ka mid ah kaas oo la soo horjeeda qof kasta oo caalamka (ay ka mid yihiin ka dhanka ah abuuraha qudhiisa) Sidaa darteed, in “button” Waa in gacmaha dambiilayaasha.
markii mid ka mid ah “caajis” saddex-button gacanta ku dhan caaqil – waxa loo yaqaan “ganacsiga“.
haddii “ganacsiga” jireyso in ay curiyaan faa'iidooyinka dhaqaale waaweyn – ganacsatada waxay billaabeen inay si gargaar ka mid ah shilalka iyo dhimashada. Maxaa yeelay, tan dambe ayaa siin doonaa kan baahan, si ay ula kulmaan baahida asaasiga ah, iyo xitaa diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo for free.
“caloolxumo” – halkan isha ugu wanaagsan ee macaash.
Sababo la Axdigu u hurin baahsan “qaba dadka kale” Dhimashada taliya on fowdo meeraha gacanta ku, taas oo formation suurtagalka ah iyo horumarinta socodka kasta oo nolosha-adkaynaya. Maxaa yeelay Adduunka, taas oo “dhadig” ma fuck aad la, Ma doonayo in aan si ay u difaacaan. War sow ma aha?
5`Nizza - Waxaa
DDT – Marka saliidda waddaa
Согласен со всем выше сказанным(написанным.) Ежели бы “быдло” о том знало, ah”goglay dixiri”,жили в г… На своей родине:)